Naadiga Bandhiga Cilmiga Iyo Caqliga oo xalqadiisii 49aad ku soo marti qadaay aqoonyahan Abdikariim Maxamed Cali + Sawiro | Subulaha News Network
You are here : Subulaha News Network » NEWS » Naadiga Bandhiga Cilmiga Iyo Caqliga oo xalqadiisii 49aad ku soo marti qadaay aqoonyahan Abdikariim Maxamed Cali + Sawiro
Posted by admin on July 31st, 2012 08:52 AM | NEWS Naadiga BCC ayaa shalay kulan aqooneed aad u balaadhan ku qabtay hoolka civil centerka(hanooninta) ee jaamacada camuud. Naadiga oo jadwalkiisa caadiga ah labadii todobaadba mar soo bandhiga kolba mawduc iyo Barnaamujyo lagu kobcinayo aqoonta iyo maskaxda dhalinta ayaa shalay bandhig aad u balaadhan u qabsoomay. Bandhigan shalay oo ahaa mid si wayn loosoo agaasimay ayaa ahaa mid ku qotomay mawduuc aad u xiisa badnaa. “Sideed U dajin Lahyd Qorshaha Noloshaaada” ayaa ahaa mawduuca uu sida qotodheer uu u soo jeediyay Ustaad-Abdikariim Maxamed Cali oo ah aqoon yahan ku nool dalka Jabuuti ahna musaqaf ku xeel dheer akhriska iyo arimaha bulshada. Bandhiga oo ay ka soo qaybgaleen macalimiin aad u farabadan iyo ardayda jamacadaha iyo dugsiyada sare ayaa aha mid si wayn u soo jiitay daawadayaasha. Barnaamujka shalay ayaa waxa daadihinayay Gudomiyaha naadiga Maxamed Cumar cismaan. Qudbada aqoonyahanka ayaa ahyd mid aad uga qiiraysiisay daawadayaasha iyadoo meelo fara badan taabanaysay. Waxa falanqayntii ka danbaysay qudbada lagaga dooday arimo dhawr ah oo ay ka mid ahaayeed. Qabyaalada,Waxbarashada iyo horumarka ayaa si wayn ay uga qaybqaateen dhalinta kazoo qayb gashay bandhigii shalay.
Bandhigan waxaa marti ku ahaa Suldaanka guud ee dhalinyarada Somaliland sul.Abdirahman Ahmed Sh.muxumed, Dr Abdiaziiz idiris nuur,Dr adam Ibrahim gawracdiid iyo marti sharaf kale oo badan oo dhamaantood ka qaybqaaday falanqaynta mawduucii shalay.
Ugu danbayn waxa lagu so bandhigay waxsoosaar aad uga yaabiyay daawadayaasha oo ahaa Wiil da’yar oo ku fikiray inuu warshad lagu habaynayo milixda ka hindiso magaalada iyadoo uu wax soosaarkiii warshadiisa qayb ka mida tusay dadwaynaha.wiilkan oo la yidhaahdo Abdikariim Saalax Aw Cabdi ayaa mar uu hadlay shegay inu ku hamiyi jiray arintan ayna usuuro gashay.
Naadigan ayaa ah naadi fuliya barnaamujyo joogto ah oo lagu jihaynayo dhalinta iyadoo naadigani la odhan karo waa ilaha ugu muhiimsan ee ay bulshadu leedahay.
Si kasteba ha ahaatee barnaamujyada nuucan oo kale ah ayaa la odhan karaa wa kuwo wax wayn ka badali kara masiirka bulshada kana qaybqaadan kara horumarka iyo horay u socodka bulshada. Ugu danbayna waxa uu Gud.naadigu balan qaaday inay bishan barakaysan ee ramadaan u soo diyaariyeen bulshada barnaamujyo mug leh.
Si’aad ula xidhiidho Naadiga halkan riix:-
« HIbaaq Mohamed iyo Heestii Oradyahanada Somaliyeed Olympic(Hees aad u qurxoon Video)
Diyaarad nooca wax basaasta ah oo xalay ku dul wareegaysay Madaarka Hargeysa iyo Buurta Naasa Hablood »